पाहुना ब्लगिंगको अप र डाउन्स - यो तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्दछ जान्नुहोस् ... | यातायात सम्बद्ध गर्न
अतिथिको अप्स र डाउन्स ब्लगिंग - जान्नुहोस् कि यसले कसरी तपाईंलाई यातायात लक्षित गर्दछ
लेखन निस्सन्देह एक शिल्प हो। यो संवेदनशीलको साथसाथै वास्तविक समयमा खास मूल्यवान छ जब तपाईं आफ्नो सेवाको रूपमा इन्टरनेट साइटमा चलाउनुहुन्छ। दोस्रो, तपाई अझ बढि लक्षित वेब ट्राफिकको लागि पाहुना ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं कुनै इन्टरनेट साइटमा जानुहुन्छ, तपाईं केवल कम्प्युटर एनिमेसनहरू वा त्यसमा ग्राफिकहरू हेर्नुहुन्न। यो त्यो हो जुन साइटको वेब ट्राफिकको विज्ञापन गर्दछ। संक्षिप्तमा, इन्टरनेट साइट कहिल्यै आकर्षक छैन।
को Perks अतिथि ब्लगिङ
तपाईंको आफ्नै इन्टरनेट साइटमा सामग्रीहरू जाँच गर्न लायक आपूर्ति गर्न बाहेक, तपाईं पनि अधिक लक्ष्य गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट ट्राफिक आगन्तुक ब्लग लेखनको विधिहरू द्वारा। तपाईं केहि लगानी नगरी विभिन्न अन्य वेब साइटहरूबाट वेब लिंकहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
केहि मूल्यांकन चर्चा
ठीक छ, त्यसोभए यो चाखलाग्दो र वास्तविक रूपमा उत्कृष्ट देखिन सक्छ। के त्यहाँ कुनै पनि अधिक पोइन्ट्स वा मुद्दा सम्बन्धित तनाव छ?
तपाईले पाहुना ब्लग लेख्नु भएको तथ्यले गर्दा यसले सबै प्रकारको सामाजिक नेटवर्कमा तपाईका कम्पोनेन्टहरू अपलोड गर्ने संकेत गर्दछ र साथै सबैलाई समीक्षामा पुग्नको लागि पनि हेर्नुहोस्, तपाईंले सिर्जना गर्नुपर्दा तपाईको उत्कृष्ट फर्ममा रहेको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। किन? किनकी तपाईले भर्खरै तयार गर्नु पर्छ भन्ने तथ्यका कारण तपाईका संरचनाहरूको सब भन्दा अपवाद पठाउनुहोस्, यो हो!
यो तपाइँको मार्केटिंगको साधन हो साथ साथै ती इन्टर्नेट साइट होस्टहरू प्रदान गर्ने तपाइँसँग समाधानहरू प्राप्त गर्न सिर्जना गर्न समय छैन। तसर्थ, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रलोभनमा राख्नुपर्दछ र तपाईंसँग के छ देखाउँनुहोस्। तपाईका विषयहरू मनमोहक हुनु पर्छ र भेरियन्टहरू पनि हुनुपर्दछ।
तपाईका विषयहरूमा चरम अभिव्यक्तिहरू लोड हुनसक्दछन्। त्यहाँ अन्य धेरै ब्लग लेखकहरू हुन सक्छन् तपाईलाई गलत सन्देश पठाउँदै तपाईंको सन्देशलाई थोरै परिमार्जन गरेर, तपाईंको वेब लिंकहरू हटाएर, र पछि तिनीहरूलाई अन्य अन्य स्रोतहरूमा अपलोड गरेर। यसले सुझाव दिन्छ कि तपाईंको इन्टरनेट साइटले कम वेबसाइट ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको छ।
बसोबास गर्नुहोस् सामाजिक मिडिया मार्फत ट्राफिक लक्षित गर्नुहोस्
केही निश्चित रूपमा दाबी गर्छन् कि आगंतुक ब्लग लेखन सबै भन्दा राम्रो अवधारणा हो विशेष गरी वेब लिंक संरचना को सम्बन्ध मा। केहि निश्चित रूपमा यस सुझाव को खण्डन हुनेछ। त्यसोभए यो स्पष्ट पार्न, तपाईका त्रुटिहरूका लागि योजना बनाउनु आवश्यक पर्दछ तर यस गतिविधिको लाभका लागि तपाई निरन्तर आफ्नो आदर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य यहाँ वेब ट्राफिकलाई लक्षित गर्नु हो। महत्व, तपाईं निश्चित रूप मा सामग्री रचना गर्न को लागी आफ्नो क्षमता को उपयोग र सबै प्रकारको मा अपलोड गर्न को लागी हुनेछ सामाजिक संजाल पछाडि लिंकहरू बनाउन।
लेखन कुनै श a्का बिना कुनै शिल्प हो। दोस्रो, तपाई अझ बढि लक्षित वेब ट्राफिकको लागि पाहुना ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो हो जुन साइटमा वेब ट्राफिकको विज्ञापन गर्दछ। तपाईंको आफ्नै साइटमा सामग्री समीक्षा गर्न लायकको प्रस्ताव बाहेक, तपाईं त्यसरी नै आगन्तुक ब्लग लेख्ने माध्यमबाट अझ बढी वेब ट्राफिकलाई लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यसले सुझाव दिन्छ कि तपाईंको साइटले कम वेबसाइट ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको छ।